वीरगञ्ज, २२ बैशाख । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) परित्याग गरेर नेकपा एमालेमा जाने उद्घोषसमेत गरीसकेका राजेशमान सिंह अन्ततः जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मा फर्किए । २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) बाट वीरगञ्ज महानगरपालिकाको नगरप्रमुख (मेयर) मा तेस्रो स्थानमा रहेका सिंह यसपटक पहिलो स्थानमा हुने दाउमा छन् । २०५४ सालमा वडा सदस्य बनेका सिंहको गत निर्वाचनमा १२ हजार १ सय ६५ मत ल्याएका सिंह सत्ता गठबन्धनबाट मधेश प्रदेशको एक मात्र महानगरपालिका वीरगञ्जको मेयरका साझा उम्मेदवार हुन् । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकिकृत समाजवादी र नेकपा माओवादी केन्द्रको समर्थन पाएपछि यसपटक मेयरमा निर्वाचित हुनबाट कसैले रोक्न नसक्ने सिंहको दावी छ । प्रस्तुत छ, सिंहसँगै स्थानीय तहको निर्वाचन र उम्मेदवारीको सन्दर्भमा गमक पोष्टका लागि गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
मेयरको टिकट पाएपनि हार्ने संकेत देखिएसँगै लोसपा छोड्नुभयो । एमालेबाट पक्कापक्की भएपछि पत्रकार सम्मेलनमार्फत मधेशी दलको विरोध गरेर एमालेको गुनगान गाएको व्यक्ति आज जसपामा आएर एमालेलाई गाली गर्नुहुन्छ बिचारमा अडिग नहुने तपाईलाई जनताले कसरी पत्याउने ?
यदि म लोसपामै भएको भए टिकट मैले नै पाउँथे म पूर्ण रुपमा विश्वस्त छु । तर त्यो पार्टी आफै अस्तव्यस्त थियो । पार्टी नै व्यवस्थित नभएपछि वीरगञ्जलाई व्यवस्थित बनाउन सकिदैन भन्ने सोचका साथ म विकल्पको खोजीमा थिए । नेकपा एमालेमा जाने लगभग पक्कापक्की भइसकेको अवस्थामा मभन्दा पहिलै वीरगञ्ज महानगरपालिकाका तत्कालिन नगरप्रमुख विजय कुमार सरावगी जीलाई पार्टीमा प्रवेश गराइयो त्यो पनि कसैको बिहेमा । जसले वीरगञ्जलाई बर्बाद बनाएको छ । त्यही व्यक्ति गएको पार्टीमा म कसरी जान सक्छु ? जसपाका नेताज्युहरुसँग कुराकानी भएपछि उहाँहरु पनि विकास र परिर्वन चाहनुहुन्छ, मेरो पनि चाहना त्यही हो त्यही भएर जसपा रोजेको हुँ । जनताले पत्याउने आधार एउटै छ, त्यो हो वीरगञ्जको बिकास । वीरगञ्जको बिकास र परिवर्तनका लागि मलाई मात्रै अवसर चाहिएको छ । त्यही अवसरका लागि मैले परिस्थितीअनुसार पार्टी फेरेको सहज स्विकार गर्छु ।
अवसरका लागि पार्टी फेर्ने तपाई अवसरबादी कि बिकासबादी ?
म के हुँ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ मैले बताइरहन पर्दैन । म उल्टै तपाईलाई प्रतिप्रश्न गर्न चाहन्छु, अवसरबादी को हो ? मधेशी जनताको मतबाट पदमा पुगेर भ्रष्टाचार गरेर करोडौ, अर्बाै कुम्ल्याउने व्यक्ति अवसरबादी हो कि ? कुनै पनि पदमा नहुँदा पनि कोरोना महामारीमा हजारौ गरिब, विपन्न एवम् श्रमिकहरुलाई निःशूल्क रुपमा भोजनको व्यवस्था गर्ने म ? वीरगञ्जबासीको मतबाट जितेर बाहिरका व्यक्तिलाई महानगरपालिकामा जागिर लगाइदिने अवसरबादी कि विभिन्न उद्योग कलकारखानाहरुमा भनेर वीरगञ्जकै जनतालाई रोजगारी लगाइदिने म ? यहाँका सर्वसाधारण जनतादेखि उद्योग व्यवसायीसम्मलाई करको बोझ लादेर जनताको ढाड सेक्ने व्यक्ति अवसरबादी हो कि कर धेरै भयो फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर आन्दोलन एवम् विरोध गर्ने म ? त्यही भएर मेरो मात्र एउटै लक्ष्य एउटै चाहना हो, वीरगञ्जको बिकास र वीरगञ्जबासीको सहज, सरल र सुखी जीवन ।
मेयरकै टिकट पाउन पार्टी फेर्नुभएको आरोप छ अनि अहिले गठबन्धनकै मेयरको साझा उम्मेदवार भएपछि त्यो आरोप त सत्य रहेछ भन्ने चर्चा चुलिएको छ । के भन्नुहुन्छ ?
आरोप प्रत्यारोप, गाली, ताली यो सब कुरा राजनीतिमा सामान्य जस्तै भइसक्यो । अँझ राजनीतिमा गैरराजनीतिक व्यक्तिहरुको हाली मुहाली हुँदा पनि समस्या भएको भान मैले गरेको छु । म बिकासप्रेमी हो । पद तथा पहुँचमा नहुँदा पनि मैले सामाजिक क्षेत्रमा गरेका कामहरु सबै वीरगञ्जबासीलाई थाहै छ । पदकै लागि पार्टी फेरेको कुरामा कुनै सत्यता छैन । तर पार्टीले मलाई योग्य र सक्षम ठानेर टिकट दिएको छ भने पार्टीको विश्वासलाई मैले पनि पूरा गर्ने आँट गरेको हुँ । म पूर्ण रुपमा विश्वस्त छु गठबन्धनको जित सुनिश्चित छ ।
राजनीतिमा गैरराजनीतिक व्यक्ति भनेर तपाई भन्नुहुन्छ । अनि तपाईलाई राजनीतिको आडमा गुण्डागर्दी गर्नुहुन्छ भन्नेहरु पनि कम छैनन् नी ?
विरोध गर्नका लागि मेरा अरु कुनै विषय र मेरा कमजोरी फेला नपारेपछि बहाना त बनाउनै प¥यो नी हैन ? ल तपाई नै भन्नुहोस्, मैले कसरी गुण्डागर्दी गरे ? मैले कोही व्यापारी, पसलेलाई धाक धम्की दिएर चन्दा उठाएको छु कि ? मैले कुनै चेली बेटीलाई बाटोमा हिँड्दा नराम्रो नजरले हेरेको छु कि ? कसैको हत्या गरेको छु कि ? मैले खासमा गुण्डागर्दीको परिभाषा नै बुझेको छैन जस्तो लाग्छ । नत्र भने यो आरोप लगाउनेहरुलाई मैले गुण्डागर्दी गरेको प्रमाण देखाईदिन चुनौती दिन्छु । यदि केही गरेको रहेछु भने म राजनीतिबाटै सन्यास लिएर जनतालाई अनुहार पनि देखाउने छैन ।
मैले अब विषय बदले, घरदैलोमा सहभागी हुनुहुन्छ । चुनावी प्रचारप्रसारमा व्यस्तता बढेको छ । गठबन्धनका अन्य पार्टीले समर्थन गर्नेमा तपाई विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
म एकदम विश्वस्त छु । प्रतिगमनलाई परास्त गर्न पवित्र गठबन्धन भएको छ । गठबन्धनकै निर्णयको सम्मान र समर्थन गर्दै यहाँका सम्पुर्ण नेताहरु एवम् कार्यकर्ताहरु पनि गठबन्धनलाई जिताउन लागिरहनुभएको छ । हामी गठबन्धनका जिल्लाका दलका नेताहरुसँग पनि पटक पटक छलफल गरीरहेका छौँ । उहाँहरु पनि एकदम सकारात्मक हुनुहुन्छ । नेपाली कांग्रेसकै नेताहरु, नेकपा एसका नेकपा माओवादीका सबै नेताहरु हामीसँगै घरघरमा पुगिरहनुभएको छ । गठबन्धनका अन्य दलले घात गर्नुहुन्छ भनेर म सोच्न पनि सक्तिन ।
तपाई मेयरमा निर्वाचित भएपनि वीरगञ्जबासीले परिवर्तनको आभाष गर्न पाउँछन् त ?
शत प्रतिशत पाउनुहुनेछ । म निर्वाचित भएको २४ घण्टाभित्रै परिवर्तनको प्रत्याभुती गराउनेछु । ऐतिहासिक शहर वीरगञ्जको परिचय फेरिन्छ । अहिलेको जस्तो फोहोर तथा लामखुट्टेको शहर भन्ने परिचय हराउनेमा म विश्वस्त छु । हामीसँग स्पष्ट भिजन छ वीरगञ्जको बिकासका लागि । त्यही अनुसारको टिम पनि छ । हामी टिम वर्कमा विश्वास गर्छाै । म निर्वाचित भएपनि सर्वप्रथम वीरगञ्जबासीलाई नै महानगरसहित अन्य क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ रोजगारीको सृजना गर्नेछौँ । सडक फराकिलो पार्नेदेखि नाला निर्माण हुँदै सबैभन्दा ठूलो समस्या अव्यवस्थित शहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्नेछौँ । अहिले कोही वीरगञ्ज आउने बित्तिकै हेर्न लायक अनि बस्न लायक छैन । तर अब कोही वीरगञ्ज आउने बित्तिकै आहा कस्तो सफा र सुन्दर महानगर भन्ने बनाउछौँ । ग्रामिण क्षेत्रका बासिन्दालाई हामी गाउँमा छौ भन्ने आभाष गराउने छैनौँ । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार, युवा, महिला, बालबालिका, उद्योग लगायतका हरेक क्षेत्रमा हामीले विशेष योजना बनाएका छौँ । योजनाहरु समावेश गएिको प्रतिबद्धता पत्र पनि केही दिनमै हामी सार्वजनिक गर्नेछौँ ।
तपाईका कुरा सुन्दा त साँच्चिकै वीरगञ्जले मुहार फेर्ला भन्ने लाग्यो तर त्यसका लागि स्रोत पनि चाहियो । कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ?
भनिन्छ, ‘जहाँ इच्छा, त्याहाँ उपाय’ नियत सही हुनुपर्छ । जसरी पनि गर्न सकिन्छ । अनि अर्काे कुरा पछिल्लो ५ वर्षमा वीरगञ्ज महानगरमा झण्डै २५ अर्ब रुपैयाँ आएको छ । यो पनि यहाँ संकलन भएको कर बाहेक । के वीरगञ्जबासीले २५ अर्बको बिकासको आभाष गरे त ? २५ अर्ब त के २५ लाखको पनि बिकास भएको छैन । एसियन बिकास बैंक (एडिबी) को परियोजना बाहेक वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आफै गरेको काम एउटा पनि छैन भन्दा फरक पर्दैन । हामी जे भएपनि उपलब्ध स्रोध साधनको पनि भरपुर रुपमा थोरै स्रोतबाट धेरै उपलब्धी हुने काम गर्नेछौँ । वीरगञ्जलाई आर्थिक राजधानी भनिन्छ । तर यहाँका जनतालाई अहिले पनि के खाउँ र लगाउँ भन्ने पिरले नै पिरोलीरहेको छ । यस्तो पनि आर्थिक राजधानी हुन्छ ? हामी यहाँका उद्योगी, व्यवसायीसँग छलफल गरेर ठोस योजनाका साथ औपचारिक रुपमै आर्थिक राजधानी घोषणा गरेर औद्योगिक कोरिडोरको रुपमा बिकास गर्ने छौँ ।